Wasaaradda Kalluumaysiga oo Ka Hadashay Shir laba Biloodle ah oo lagu faaqido kobcinta dhaqaalaha | Somaliland.Org
Wasaaradda Kalluumaysiga oo Ka Hadashay Shir laba Biloodle ah oo lagu faaqido kobcinta dhaqaalaha
December 13, 2012	Hargeysa (Somaliland.Org)- Agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda Somaliland Md. Maxamed Cilmi (Ilkacase) ayaa faah-faahin ka bixiyay shir laba biloodle ah oo saaka wasaaradaasi lagu qabtay oo lagaga hadlayay kobcinta dhaqaalaha Somaliland.
Shirkaasi oo uu furay Wasiirka wasaaradda Kalluumaysiga Md. Cabdilaahi Jaamac Cismaan (Geel-jire) waxa ka soo qeyb galay wasaaradaha dawladda qaarkood, taliyaha ciidanka ilaaladda xeebaha, badhasaabka Saaxil, Ha’yadaha caalamiga ah iyo ururadda samo-falka maxaliga ah.
Agaasimaha Guud ee Kalluumaysiga Md. Maxamed Cilmi (ilkacase) oo kulankaasi ka dib saxaafadda la hadlayay ayaa ka warbixiyay qodobadii shirkan lagu faaqiday, waxaanu yidhi “Waxa saaka xarunta wasaaradda kalluumaysiga lagu qabtay shir laba biloodle ah oo ku saabsan sidii loo kobcin lahaa dhaqaalaha Somaliland, waxa ka soo qeyb galay Ha’yadaha caalamiga ah,wasaaradaha dawladda iyo ururadda samo-falka wadaniga ah. Shirkan oo ay Guddoomiye u tahay wasaaradda kalluumaysigu.”
Md. Maxamed Ilkacase oo hadalkiisa sii watay wuxuu intaasi ku daray “Waxa ka mid ahaa wasaaraha ka soo qeyb galay agaasimeyaasha guud ee wasaaraha Beeraha, xanaanadda xoolaha,qorshaynta iyo dhamaan Ha’yadaha caalamiga ah ee ka shaqeeya dhaqaale kobcinta.”
“Shirkan waxa lagaga hadlayay barnaamijyada ay wasaaradahan iyo Ha’yadahani qabtaan. Waxa kale oo lagu falan-qeeyay sidee shaqo loo abuuraa? Iyo sidee dhaqaalaha loo kobciyaa iyo sida loo kobcin karo horumarinta dhaqaalaha sida kalluumaysiga, beeraha,xabkaha iyo kuwa kaleba,”ayuu yidhi Agaasimaha guud ee wasaaradda kaluumaysigu.
Agaasimaha guud ee wasaaradda Kalluumaysiga Md. Maxamed Cilmi (Ilkacase) oo la weydiiyay faa’iidada shirkan ugu jira Kalluumaysatadda waxa uu yidhi “Waxa faa’iidada kalluumaysatadda wadaniga ah ugu jirtaa ay tahay iyaga laftooda ayaa shirka yimaada oo barnaamijyadooda iyo baahiyahooda ka warama oo u soo bandhiga wasaaradaha iyo Haa’yadaha caalamiga ah.”
Previous PostHaweenka reer Awdal iyo Salel Oo Deeq Lacageed soo gaadhsiiyay Gudida abaaraha labadaas GobolNext PostMaamulka Sare ee Dugsiga Abaarso Tech Oo Si Adag U Beeniyay war sheegayay inay gaaleynayaan Ardayda	Blog